Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone oo ka iPhone in Computer
Guide: Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone oo ka iPhone in Computer
Waxaa weli jira dadka qaar aan garanayn si ka computer wareejiyo music inay iPhone, gaar ahaan CD, kuwaas oo uu burburiyay heeso. Dhab ahaantii, waa mid aad u fudud loo sameeyo. Dadka intooda ugu badan, qayb ka mid adag waa habka kale: sida in ka iPhone wareejiyo music in computer. Haddii lahaa ee aad kala kulantay dhibaatada koowaad ama labaad, aad jawaabta halkan ka heli kartaa. Maqaalkani waxa uu ka mid ah 2 qaybood:
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Computer Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Computer
Waxaad u Baahan Tahay:
Your iPhone iyo cable USB ay
Kombiyuutar leh Lugood rakibay
Copy heesaha oo dhan iyo playlists ka iPhone in Lugood Library kombiyuutarka ah;
Bedelka heesaha oo dhan ka iPhone in gal on your computer la click fudud;
Bedelka songs soo xulay iPhone in computer aan ka kaaftoomi kasta;
Taageerada iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5c, 5s, 4s, 4, 3GS oo ay maamulaan ee macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6, iyo macruufka 5;
La jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10,11 / 10,10 / 10,9 / 10,8 / 10,7 / 10,6;
Tallaabada 1 Dami syncing si toos ah in Lugood
Burcad aad Lugood Library on your computer. Riix "Edit"> "rabtid ...". In uu furmo suuqa cusub, guji "Qalabka" tab. Ka dibna hubi ikhtiyaarka "Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah". Ka dib, la xiro Lugood aad.
Tallaabada 2 Download iyo rakibi Wondershare TunesGo
Download TunesGo Wondershare. Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) versions waxaa laga heli karaa. Ka dib markii ay soo degsado, ku rakibi on your computer. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer iyo ordi TunesGo Wondershare. Your iPhone muuqan doonaa sida sawir dhinaca midig.
Tallaabada 3 Transfer music ka iPhone in Windows PC ama Mac
Jidka # 1. On uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka "Si gal". Si fudud u gujinaya, sanduuqa wada hadal ku weydiin doonaa inaad dooro gal on your computer si loo badbaadiyo intaan songs wareejiyo. Tani waa sida ugu dhaqsaha badan ka iPhone wareejiyo music in computer.
Jidka # 2. Guji "Media" in ay galaan suuqa kala guddi ay gacanta u music. Laga soo bilaabo halkan, waxaad tahay inuu soo xusho songs doonayay oo guji saddexagalka rogay for "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, doortaan "Dhoofinta in My Computer".
Video Tutorial: Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Computer!
Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone
Asal ahaan, waxaa jira 2 siyaabo iska fudud oo ka computer wareejiyo music inay iPhone. Iyaga Hubi hoos ku qoran:
Songs Import si iPhone aan Lugood
Ku dar Music ka Computer si ay iPhone via Lugood
Waxaa hubaal ah, Lugood waa doorashada hogaanka u isticmaala in ay heeso ka computer wareejiyo iPhone. Oo waxaa u muuqataa dadka isticmaala iPhone ay isku dayayaan in ay isticmaalaan Lugood u soo dirto heesahaaga iPhone ay ugu bilowgii aad. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku eg tahay mid computer, taas oo macnaheedu yahay haddii aad isku dayayaan in ay ka computer kale wareejiyo music aad iPhone, waxaad waayi doonaa xogta iPhone aad. Tani waa waxa ay dadku ma jecla, sababtoo ah waa sidaas u adag oo loogu talagalay dadka kuwaas oo in ka badan hal computer inay ku raaxaystaan ​​music leeyihiin. Haddii aad ka dhacaan noocan oo kale ah xaaladaha, waxaad ka computer wareejin karaan heesahaaga iPhone aan Lugood, laakiin Wondershare TunesGo . Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo isticmaalo TunesGo Wondershare inay ka computer wareejiyo music inay iPhone.
Tallaabada 1. Run Wondershare TunesGo
Click Download hoose si aad u dejisan TunesGo Wondershare oo ku xidh on your computer. Waxay u ordaan oo xiriiriyaan iPhone la your computer via aad cable USB iPhone. In labaad ah, waxaad arki kartaa in aad iPhone muuqan suuqa kala muhiimsan ee Wondershare TunesGo
Tallaabada 2. Nuqul Music ka Computer si ay iPhone
Riix Media galeeysid ah. Markaas ee Music uu furmo suuqa, guji-xagalka xagga hoose ku Add in ay doortaan dar File ama dar Folder . Haddii aad xilka baneeyey soo qaado sawiro somg ka ururinta si aad iPhone, dooro dar File . Marka heesaha oo dhan aad doonayay waa in gal ah, guji Add Folder . Next, guji Open heeso wareejiyo si aad iPhone. Horumarka socon doono ilaa dhowr ilbiriqsi.
Haddii aad isku dayayaan in ay la isticmaalayo Lugood inay ka computer wareejiyo music inay iPhone, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo sameeyo. Ka hor inta aadan la isticmaalayo Lugood, fadlan hubi aad ku rakiban version ugu dambeeyay. Haddii aan, fadlan kala soo bixi nooca ugu dambeeya ee Lugood oo ku xidh on your computer.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la your computer
Burcad Lugood on your computer. Clic ku View menu ee Lugood dooro Show galeeysid ka mid ah liiska hoos-hoos. Marka aan sidaa yeelno, waxa aad helaysaa aragti fiican ee aad Lugood Library. Connect aad iPhone la computer via USB ah cable iPhone aad. Marka xiran si guul ah, aad iPhone soo bixi doona hawlgallada AALADAHA galeeysid ah. Haddii aadan ka your computer saaray heeso maktabadda Lugood aad weli, waa in aad riix File menu dooro Add to Library in ay dajiyaan heeso hore.
Tallaabada 2. Transfer Music inay iPhone via Lugood
Riix si aad iPhone hoos AALADAHA galeeysid ah. Markaas riix Music tab dhinaca midig ee suuqa. Hubi nidaameed Music iyo doortaan labada si ay u gudbiyaan heesaha oo dhan maktabadda ama heeso loo doortay in ay aad iPhone. Riix Codso si ay u fuliyaan nidaamka wareejinta.
Import VCF Faylal ay si iPhone
iPhone si Mac Talooyin Center
Nidaameed iPhone si Mac aan Hitch ah
Music kaabta ka iPhone in Lugood
Nidaameed Gmail Xiriirada inay iPhone
Kaabta iPhone Conatcts in Gmail
Demi Xogta laga Android inay iPhone
Content ka iPhone dhaqaaq Android
Nuqul Xiriirada ka Nokia si iPhone
Xiriirada kala iibsiga ka HTC si iPhone
Ka Samsung Bedelka SMS si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka iPhone in Lugood & ka Lugood si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad si iPhone Si fudud
Sida loo Setup iPhone ugu horeeya iyo Raadi Disappered ugu horeeya ee ku iPhone
10 Talooyin in celi iPhone Battery in Hayso Waxaa xaalad wanaagsan
iPhone mini Release Date iyo Price: News Iyo Wararka Xanta
Sida loo View iPhone Messages on Mac ama PC
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Music, Photos, Videos & SMS ka Nokia si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Music inay iPhone ka PC ama iDevices
> Resource > iPhone > Guide: Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone oo ka iPhone in Computer